दुई साता वितिसक्दा पनि हत्यारा पक्राउ परेनः परिवारमा रुवाबासी - News Today
दुई साता वितिसक्दा पनि हत्यारा पक्राउ परेनः परिवारमा रुवाबासी
मृतक मनोज भनिने जितेन्द्रनारायण देव ।
राजविराज, १५ कार्तिक । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वडा नम्वर–६ का युवा जितेन्द्रनारायण देवको हत्या भएको दुई साता वितिसक्दा पनि अझैं हत्यारा पक्राउ पर्न सकेको छैन ।
मनोज नामले चिनिने उनकोे शव बरहीबीरपुर चौकदेखि करिब पाँच सय मिटर पश्चिम नहरमा कार्तिक ३ गने फेला परेको थियो । युनिक एजुकेसनल एकेडेमीमा डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रथम वर्षमा अध्ययनरत ३० वर्षिय देव असोज ३० गते शनिवार करिब ४ बजेको समयमा साइकल चढेर घरबाट हिँडेका थिए । अबेर साँझसम्म पनि घर नफर्केपछि परिवारजनले उनको खोजी कार्य तीब्र पारेका थिए । हरेक दिन करिब चार–पाँच बजेतिर घुम्न बजारतर्फ निस्किने गरेका उनी घर नफर्केपछि उनका भाइ चन्द्रनारायण देवले खोजी कार्य तीब्र पार्दै स्थानीय पत्रिकामा समेत सूचना दिएका थिए । दाजुको खोजीमा व्याकुल रहेका भाइले जब कार्तिक ३ गते बिहान घटनाबारे जानकारी पाएपछि उनी आकाशबाट खसे झैं भए ।
आफन्तजनसहित हेर्न जाँदा दाजुको कान काटिएको दाहिनेतर्फ कानदेखि तलसम्म गम्भीर चोट तथा निलडाम देखिएको मृतकका भाइ चन्द्रनारायणले बताए । उनलाई निर्ममतापूर्वक मारेर नहरमा फालिएको अनुमान गरिन्छ । प्रत्येक सोमवार नहरमा पानी बन्द गर्ने गरिएका कारण पानी कम भएपछि उनको शव फेला परेको थियो । शवलाई विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको छ । यद्यपी उक्त रिपोर्ट समेत हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
उनको विवाह गत जेठ १७ गते झापाको शिवगञ्जमा २१ वर्षिया विष्णुमाया देवसँग विवाह भएको थियो । समाज तथा साथीभाइसँग पनि अति मिल्ने तथा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग पनि आवद्ध नरहेको अवस्थामा कसले र किन आफ्नो भाइको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको हो ? यसबारे केही खुल्न नसकेको भाइ चन्द्रनारायणले बताए ।
काठमाण्डौमा मास्टर इन पब्लिक एडमिनिष्ट्रेसनको अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत चन्द्रनारायण दशैमा सम्पूर्ण परिवारजन मिलेर खुशी मनाउने सपना साँचेर असोज ३० गते घर आएका थिए । दैवको लीला, फूलपातीकै दिन विहान दाजुको हत्या गरिएको खबर आएपछि सारा परिवार रुवाबासीमा परिणत भएको उनले भावुक हुँदै बताए ।
दुई साता वितिसक्दा पनि हालसम्म दाजुको हत्यारालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसेकेकोमा किरिया बसेका चन्द्रनारायण गुनासो गरे । हत्याराको खोजी तथा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले तदारुकता नदेखाएको जानकारी दिँदै उनले भने ‘दाजु चढेको साइकलबारे पत्तो लाग्न सकेको छैन, वहाँले प्रयोग गर्ने मोबाइलको कल डिटेल्स र शवको पोटिमार्टम रिपोर्ट, सँगै अध्यनरत साथीहरुबाट समेत बुझ्दा अनुसन्धानमा केही नकेही खुल्नेमा हामी आाशावादी छौं ।’ दाजुको हत्यारालाई खोजी गरी अविलम्ब कानूनी कार्वाही गर्न उनले माग गरेका छन् । दुई दाजुभाइ र दुई दिदी–वहिनी रहेका उनको परिवारजन अझैं शोकमग्न अवस्थामा छन् । उनले भने ‘बा–आमा र बहिनीहरुलाई रोएको र भाउजुको समेत विक्षिप्त अवस्था देख्दा म आफूलाई पनि सम्हाल्न सक्दिन ।’
राजविराज–१ स्थित हटियामा मट्टीतेल व्यवसाय गरेर परिवार चलाउनुका साथै छोराछोरीलाई पढाउँदै आएको पिता शंकरलाल देवले बताए । छोराको हत्याको खबरले सम्पूर्ण परिवारमाथि बज्रपात नै भएको उनले आँखा टिलपिल पार्दै भने ‘सानो व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउने हामीहरुमाथि कसले र किन यस्तो गरेको हो ? थाहा छैन, मेरो यतिमात्रै बिन्ति छ कि छोरा मनोजको हत्यारालाई अविलम्ब पक्राउ गरी कडा कार्वाही होस् ।’
सिएन देव भनेर चिनिने मृतकका भाइ चन्द्रनाराण मधेश स्वराज अभियानका अभियन्ता हुन् ।
Previous : सप्तरीका व्यवसायी सञ्चेतीको निधन
Next : एमपिएलको दोस्रो दिन गणपति र रञ्जितपुर राइडर्स विजयी